Ku soo gudbi adoo adeegsanaya PubPub - AfricArXiv
Macluumaadka Cilmi -baarista Aphrike
Soo gudbi dhanka PubPub
Ku saabsan PubPub
PubPub, mashruuca calanka ee Kooxda Aqoonta Mustaqbalka, oo la bilaabay 2017. Madal il furan ayaa taageeraysa daraasiin joornaallo dib-u-eegis lagu sameeyay iyo buugaag laga soo saaray jaamacad iyo bulshada daabacan, iyo ku dhawaad ​​kun qoraal daabacan oo ay dhiseen oo ay ilaalinayaan aqoonyahano shaqsiyadeed iyo aqoonyahan. waaxaha. PubPub waxay baraysaa habka abuurista aqoonta iyadoo lagu biirinayo wada hadalka, faaqidaad, iyo u qaabaynta qaab daabacaad dhijitaal ah oo gaaban iyo qaab dheer.
Haddii aad ka soo shaqeysay, oo aad hadda ka shaqeyneyso, ama aad ku talo jirto inaad ka shaqeyso cilmi-baaris la xiriirta cudurka coronavirus oo aad jeceshahay inaad soo gudbiso, fadlan raac tilmaamaha hoose.
1. Duubista Fiidiyowgaaga
Fadlan kahadal helitaan gaar ah ama dhibic cilmi baaris ah.
Sheeg magacaaga, xiriirka aad la leedihiin, edbinta, iyo dalkaaga.
Kala hadal aqoonta ku habboon ee aad ka soo korodhsatay ama aad rajaynayso in aad ku kasbato shaqadaada, oo ay ku jiraan dariiqada iyo hababka sayniska.
Samee talooyin ka soo baxa gunaanadkaaga ama aragtidaada. Haddii ay suurtagal tahay, fadlan sidoo kale ku dar cidda shaqadan u heli lahayd sida ugu habboon (qaybaha kale ee cilmi-baarista ama shaqada socda, wadashaqeynta suurtagalka ah).
Muuji 3 illaa 5 tixraacyo, oo ay kujirto adigu. Fadlan soo bixi macluumaad ku filan (magacyada qoraaga, sanadka daabacaadda, cinwaanka joornaalka, cinwaanka maqaalka) si tixraac looga helo kooxdeena. Haddii ay suurtagal tahay ku dar doi ka kala duwan foomka soo gudbinta.
Sheeg inaad ogolaatay inaad la wadaagto cajaladdan a Shatiga CC-BY.
2. Soo gudbinta duubistaada
Fadlan isticmaal foomkan. Hubso inaad buuxiso dhammaan meelaha loo baahan yahay oo aad geliso duubistaada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama dhibaato ah, fadlan emayl u soo dir: info@africarxiv.org
Fadlan aqri tilmaamahayaga intaadan gudbin, hubi inaad u hoggaansanaato liiska hubinta oo aad ku bixiso dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah qoraalkaaga.
3. Waxa laga filan karo
Markaad si guul leh u gudbiso duubistaada, waxaad filan kartaa inaad dib nooga maqasho muddo 5 maalmood oo shaqo gudahood.
Haddii la aqbalo, soo-gudbintaada waa la qori doonaa oo tixraacyo laxiriira ayaa lagu dari doonaa. Faylka maqalka / muuqaalka waxaa lagu dhajin doonaa khadka tooska ah Ururinta AfricanArXiv PubPub oo leh Crossref DOI iyo CC BY 4.0 liisanka lahaanshaha .. Faylka qoraalka waxaa loo geyn doonaa mid ka mid ah barnaamijyada bahwadaagta la ah AfricArXiv (OSF, ScienceOpen, ama Zenodo).
Waxaan ku dari doonaa AI / mashiinka tarjumaadda qoraalka 2-3-ka luqadood oo kale haddii aad ku muujiso mid ka mid ah soo gudbintaada iyo qaasatan haddii luqadaha qaarkood ay muhiim u yihiin in lagu daro xaalada gobolka darteed.
Wixii dhibaato ah, su'aalo ama walaac ah, emayl: info@africarxiv.org
Kooxda Mustaqbalka Aqoonta iyo AfricanArXiv waxay soosaarayaan maqal iyo muuqaal maqal ah oo ku saabsan PubPub
Kooxda Mustaqbalka Aqoonta & AfricArXiv	 23rd April 2020	 No Comments
PubPub, oo ah madasha wada-shaqeynta il-furan ee ay dhistay Kooxda Aqoonta Mustaqbalka, ayaa iskaashi la sameysay AfricArXiv, oo ah bakhaarka diyaarinta Afrika, si ay u martigaliso qoraalo maqal / muuqaal ah. Iskaashigan…